Barcelona oo Real Madrid ku dubatey 2-0 Champion Leugue(Warbixin + SAWIRO) – SBC
Barcelona oo Real Madrid ku dubatey 2-0 Champion Leugue(Warbixin + SAWIRO)
Barcelona ayaa u muuqanaysa inay booking gareysatey final-ka Champion League -ga Wembley bisha soo socta ka dib markii waxay kaga guuleysatey ka dib markii caawa Real Madrid gurigeeda ku karbaashtey lugtii koowaad ee ciyaaraha Simifinal-ka Champion-ka. Ciyaar adag oo xifaalsan xoogan ka dhex muuqdey isla markaana ganaaxyo badan dhaceen oo waliba qaarkood dad aan ciyaartaba ku jirin fadhigooda loogu tagin ayaa ka dhacdey garoonka Santiago Bernabeu ee hoyga u ah kooxda ugu badan ee haysata koobabka Yurub ee ka dhisan caasimada Spain ee Madrid.
Ciyaartan oo saxaafadu si weyn u hadal haysey maanta ayaa ku bilaabatey dar dar xoogan, weerar iyo weerar celis waxaana sidii caadada aheyd macalin Jose Mourinho uu dhegta wax ugu soo sheegay xidigihiisa khadka dhexe si ay u kala gooyaan kubad qaabeynta Messi Iyo Xavi kuwaasi oo kubadaha ay dhisaan geesaha ka siinayey David Vila, Pedro & mar marka qaar Daniel Alves.
Real waxay u muuqanaysay inay difaac ku jirto taasi oo macnuhu u muuqdey yaan gurigaaga gool kaaga dhalan maadama Aggregate goolasha la isku xisaabinayo, waxaase taasi diidanaa weerarka Baca oo si isdaba joog u soo butaacayey.
Real inkastoo difaac ku jirtey hadana kubad dhaadheer oo counter attack u yara ekeyd ayey xaga sare u marisanay Cristiano Ronaldo & Di Maria laakiin waxaa mar kasta shafka u garaacayey kubadahaasi daafaca birta ah ee Barca Pique iyo Puyol inta aanba la gaarin goolahey Valdes.
Si kastaba ha ahaatee daqiiqadii 61-aad ayaa isbadal ciyaarta ku dhacay ka dib markii difaac adag oo khadka dhexe Real u hayey la siibay ka dib markii kaarka cas (Red Card) uu qaatey Pepe oo qalad ku galey Daniel Alves. Kaarkaasi cas ee uu qaatey Pepe waxay neef weyn ka soo fujisay Messi & Xavi oo isku xirkoodu uu ahaa mid kala go’an, taasi oo ka dhigtey Real 10 nin isla markaana iskugu ururay niyad jab iyo waliba difaac aan adkeyn, taasi oo ay u sii dheereyd kaar cas (Yellow Card) la siiyey Sergio Ramos oo lugta dambe ee kulanka Nou Cam maqnaan doona sida uu qabo xeerka UEFA .
Bixitaankii Pepe waxaa kaloo Real u sii raacay Jose Mourinho oo la dhex galiyey shabaq u dhaw taageerayaasha isla markaana lagu amray inaanu soo istaagi karin seeraha tababaraayasha ciyaartana aanu ka hadli karin ka dib markii uu ka dooday kaarka cas ee la siisay Pepe.Daqiiqadii 77-aad ayaa Messi wuxuu ka dhex helay agagaaraha shabaqa Real kubad uu soo qaabeeyey ciyaaryahanka Ibrahim Affelay oo badal ku soo galey kaasi oo say tahay uu u celiyey daafaca Real ee garabka bidix Mercelo waxaana Messi uu kubadaasi ku hubsadey shabaqa Real ka dib markii uu ka dhex bixiyey lugaha goolhaye Iker Casillas. Ciyaarta oo ay sidoo kale ka dhiman tahay 3 daqiiqo oo qura ayaa Messi mar kale wuxuu kubad la dhex marey afar ka mid ah difaacyada Real ka dib marii uu ka faa’ideystey xirid la’aantooda iyo waliba niyad jabka ku dhacay, isagoo kubadii uu la dhexmarey daafca Real lagu xusuustey goolkii caanka ahaa ee Diego Maradona, waxaana jira soo shaac bixid sheegaysa goor horeba in goolkaasi uu noqon doono goolkii sanadkan. Ciyaartii ayaa sidaasi ku soo dhamaatey waxaana 2-0 wajiga koowaad guul kala baxdey guriga Real Madrid kooxda Barca oo caawa iska dhaqdey wacdirihii lagu dhigay finalkii koobka Boqorka Spain.
Waxyaabaha kale ee ciyaartii caawa ka dhacay waxaa ka mid ahaa ka dib markii kaar cas luqunta loo galiyey goolhayaha labaad ee Barcelona Jose Pinto ka dib markii uu si xun gacmaha ugula tagey mid ka mid ah saraakiisha Gudiga EUFA ee ciyaarta dhexdhexaadinayey. Gunaanadkii ciyaarta waxaa laga soo sheegay dariiqa loo aado qolalka dhar badalka muran iyo dagaal ka dhex aloosan ciyaartoyda labada kooxood, taasi oo la sheegay in ay tahay ciladaha haysta kubada Spain oo ah in qiimeyn la’aan iyo caadifaad fool xun ay u dhaxeyso kooxaha gaar ahaan labadan kooxdoo, kuwaasi oo meel ka dhac weyn ku keenaya ololaha EUFA ee ah “Tixgalin” ama Respect taasi oo u muuqanaysa in Spain oraahdaasi uu ka soo gaaray dhaawacyo iyo daqaro haaro waa weyn wata.